11/22/2013 09:38:00 AM crime-news
ပဲခူးမြို့၊ အမှတ်(၃)ရဲစခန်းအပိုင်၊ ကျွန်းသာယာရပ်ကွက်၊ မင်းကြီးညို(၅)လမ်းတွင် (၂၀.၁၁.၂၀၁၃)နေ့ ည (၂း၀၀) အချိန်ခန့်က အိမ်ကျော်နင်းမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မဇာဇာလင်း(၃၄)နှစ်(ဘ)ဦးကျော်လင်း၊ဆေးလိပ် လိပ်သူသည် သားဖြစ်သူ ရန်ကျော်လင်း (၁၂)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဝင်းခိုင်နှင့်အတူနေ အိမ်အိပ်ခန်း အတွင်း အိပ်နေစဉ် ၄င်း၏မိန်းမကိုယ်အား ကိုင်တွယ်ပွတ်သတ် နေ၍ အိပ်ယာမှလန့်နှိုးပြီး ကြည့်ရာ အိပ်ခန်း ၀ါးထရံကြားမှ လက်သွင်းပြီး ခြင်ထောင်အတွင်းအိပ်နေသည့် ၄င်း၏မိန်းမကိုယ်အား ကိုင်တွယ်ပွတ်သတ် ကြောင်းသိရှိ၍ အတူနေဖခင်ဖြစ်သူဦးကျော်လင်း(၆၀)နှစ်အားအော်ဟစ် ပြောကြားရာလက်မှာ ခြင်ထောင်အပြင်ဘက်သို့ ထုတ်သွားပြီး နေအိမ်ပေါ် မှဆင်းပြေးရာ မဇာဇာလင်းသည် ထရံပေါက်မှကြည့်ရှုရာ အိမ်နီးချင်း ရဟန်းဘွဲ့ ဥူးပုည၊လူအမည် ကပ္ဂလီ(၂၉)နှစ်၊(ဘ)ဦးကုလားဖြစ်ကြောင်း ”လ”ရောင်ဖြင့် သဲကွဲစွာတွေ့မြင်ရပြီး ကပ္ဂလီမှ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့်၎င်း၏နေအိမ်ပေါ် သို့တက်ပြေးသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် ပဲခူးအမှတ်(၃)ရဲစခန်းသို့ မဇာဇာလင်းမှ တရားလိုပြုတိုင်တန်းခဲ့ရာ စခန်းမှကပ္ဂလီအား(ပ)၄၈၃/၂၀၁၃ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၅၆(ညဉ့်အချိန်ပုန်းလျှိုး အိမ်ကျော်နင်းမှု)/၂၉၅-က(ဘာသာ၊သာသနာ အကြည်ညိုပျက်အောင်ပြုလုပ်မှု)တို့ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျှက်ရှိ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
11/22/2013 08:51:00 AM Myanmar-news
အမေရိကန်၏ ငွေချေးလုပ်ငန်းစနစ် ပြောင်းလဲမည့်သတင်းများကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထိုးကျလာပြီး ပြည် တွင်းရွှေဈေး တစ်ရက်အတွင်း ၄၀၀၀ ကျပ် ကျဆင်းလာသည်ဟု ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များကပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ တွင် ပြည်တွင်းရွှေဈေး တစ်ကျပ်သားလျှင် ၆၇၂,၀၀၀ ကျပ်ဈေးရှိရာမှ ၂၁ ရက်တွင် ၆၆၈,၀၀၀ ကျပ်ထိ ကျဆင်းလာသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ တွင် ပြည်တွင်းရွှေဈေး ၆၇၇,၀၀၀ ကျပ်ဈေးရှိနေ ရာ ၂၁ ရက်ဈေးအရ သုံးရက်အတွင်း ၈,၀၀၀ ကျပ်ထိ တောက်လျှောက် ကျဆင်းလာသည်။
တိတ်စိန်ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်အောင်က “ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကြောင့် ပြည်တွင်းဈေးပါ ထပ်ကျလာတာပါ၊ တစ်ရက်တည်းကို လေးထောင်လောက်ကျသွားတယ်၊ တောက်လျှောက်ကျဦးမယ်လို့ မှန်းနေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တစ်အောင်စလျှင် ၁,၂၇၄ ဒေါ်လာဈေးရှိရာမှ ၂၁ ရက်တွင် ၁,၂၄၆ ဒေါ်လာ ဈေးထိကျဆင်းလာသည်။ ပြည်တွင်းရွှေပေါက်ဈေးသည် သင်္ကြန်ကာလနောက်ပိုင်း အနိမ့်ဆုံး ဈေးဖြစ်သည်။
11/22/2013 08:50:00 AM IT-news
ဆိုနီကုမ္ပဏီထုတ် ပလေးစတေရှင် ဖိုးနဲ့ အပြိုင် မိုက်ကရိုဆော့ဖ် က xbox one ဂိမ်းကစားတဲ့ စက် ကို ဈေးကွက်ထဲမှာ မကြာခင် နာရီပိုင်း အတွင်း ရောင်းချတော့မှာပါ ။ ဂိမ်း ကစားရုံတင်မက ၊ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုလို့ ရပြီး အသံနဲ့ အမိန့်ပေးလို့ရတဲ့ ခေတ်မှီ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီစက်ကို ၄၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
11/22/2013 08:46:00 AM articles
အာဆီယံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် အက္ခရာစဉ် အလိုက် အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ရယူရခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆင်သင့် မဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို မြန်မာနိုင်ငံအား ပေးအပ်ရန် အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်များက သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့သည့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဆက်စပ် စည်းဝေးပိတ်ပွဲကို အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ဘရူနိုင်း နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအခမ်းအနားတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွက် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို မြန်မာနိုင်ငံက လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ရယူသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အာဆီယံ ထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲများ အပါအဝင် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများ၊ အာဆီယံအပေါင်း နိုင်ငံများနှင့် ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးများကို ဦးဆောင် ကျင်းပပေးရခြင်း နှင့်အတူ အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတစ်ခု အနေနှင့် ထမ်းဆောင်ရမည့် အခြားသော ကြီးလေးသော လုပ်ငန်း တာဝန်များကိုလည်း တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
“၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူခြင်းဟာ မိမိတို့ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာကတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်လို့ အလေးအနက် ထားပါတယ်” ဟု အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် လွှဲပြောင်း ရယူပြီးချိန်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ပြောကြားရာတွင်လည်း “အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်နေချိန်၌ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေးကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ သမားရိုးကျ မဟုတ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ကိစ္စရပ်များ၊ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စွမ်းအင် ဖူလုံရေး၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ပေါင်းစပ် ဆက်သွယ်ရေး တို့အပြင် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မည်” ဟု ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် အချို့က ‘အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် မြန်မာ လွှဲပြောင်း ရယူ’ ဟူ၍ ရေးသား သုံးနှုန်းခဲ့ သော်လည်း အချို့က ‘နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် လွှဲပြောင်းရယူ’ ဟူ၍ ရေးသားကြသည်ကို သတိပြု ဖတ်ရှုမိပါသည်။ အမှန် တကယ်တော့ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း မဟုတ် သကဲ့သို့ ဦးသိန်းစိန် အနေနှင့်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ တစ်ဦးတည်း အနေနှင့် လက်ခံခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စား တစ်နည်း မြန်မာပြည် သူများ၏ ကိုယ်စား လက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ဆိုသည်မှာ သမ္မတကို ပေးအပ်ခြင်း မဟုတ် သကဲ့သို့ သမ္မတ တစ်ဦးတည်း အပေါ်တွင်သာ တာဝန်ရှိသည် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ သိရှိ နားလည်ဖို့ လိုပါသည်။ အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ကို ပေးအပ်ခြင်းသာ ဖြစ်၍ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ အားလုံးတွင် တာဝန် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများဟု ဆိုရာတွင် တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ ဆိုသည်မှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ လွှတ်တော်များနှင့် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး အပါအဝင်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းများအနက် အဓိက တာဝန်အရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းမှာ သမ္မတကြီး ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်း အနေနှင့် အထွေအထူးပြောရန် မလိုအပ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ဝန်ကြီး တစ်ဦးချင်းက တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော ဝန်ကြီးဌာနများ အတွက်မူ အလေးအနက်ထား၍ ဆွေးနွေး တင်ပြလိုပါသည်။
အာဆီယံအရေးနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ မရှိမဖြစ် အရေးပါသော ဌာန ဖြစ်သကဲ့သို့ ယခု အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ယူရသော အခါတွင်လည်း အထူးအရေးပါပြီး အလုပ်အများဆုံး ဌာနတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က “ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ အလှည့်ကျတဲ့ အခါမှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့စာမျက်နှာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေသတွင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နိုင်ငံဟာလည်း သူတို့နဲ့ တန်းတူရည်တူ လုပ်နိုင် ကိုင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာလည်းပဲ မနိမ့်ကျဘူး။ မြင့်မားတယ်။ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ တန်ဖိုးတွေကို သိရှိနားလည်တဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်းကို ကမ္ဘာကို ပြခွင့်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဟာက မိမိနိုင်ငံအတွက် ရတောင့်ရခဲ အခွင့်အရေးမှာ အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြမယ် ဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုမို မြင့်မားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဖတ်ရှုလိုက်ရပါသည်။ (၁၁.၁၀.၂၀၁၃၊ Daily Eleven)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၏ ပြောကြားချက်သည် မှန်ကန်သော ပြောကြားချက်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်း ပြောသည့် အတိုင်း အမှန်တကယ်ဖြစ်ဖို့ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုတည်း အနေနှင့် တတ်နိုင်သောကိစ္စ မဟုတ်ပါပေ။ ဥပမာ-ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက “ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ တန်ဖိုးတွေကို သိရှိ နားလည်တဲ့ ပြည်သူတွေ” ဟု ဆိုထားရာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေသည် အမှန်တကယ် ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် တန်ဖိုးများကို သိရှိ နားလည်ကြပြီလား ဆိုသည်ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ ပြည်သူတွေ၏ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်တို့သည် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီဟု ဆိုညားအံ့၊ ပြည်သူတွေကို မည်သူတွေက ပညာပေးကြမည်၊ မည်သူတွေက လေ့ကျင့် ပေးကြပါမည်နည်း။
အမှန်တကယ်တော့ ပြည်သူတွေကို လေ့ကျင့် ပညာပေးကြရမည့် သူများမှာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်သူကို ဒီမိုကရေစီ အသိပညာ ပေးကြမည့် အစိုးရ/ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်တိုင်ရော ဒီမိုကရေစီအသိ မည်မျှ ရှိကြ၍ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် မည်မျှ ပြည့်စုံ ကြပါပြီနည်း။ ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီ နှုန်းစံများနှင့် မညီသော်လည်း ယနေ့တိုင် ပြင်ဆင်/အသစ် မပြဋ္ဌာန်းရသေးသည့် ဥပဒေများစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ ပြည်သူကို စိတ်ငြိုညင်စေသော၊ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စေသော၊ ကုန်ကုန် ပြောရလျှင် ပြည်သူကို စိတ်ဆင်းရဲစေသော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ အမြောက်အမြား ရှိပါသေးသည်။ ထို့အပြင် ပြည်သူကို ဆက်ဆံရာမှာ၊ ပြောဆိုရာမှာ အာဏာရှင် အငွေ့အသက် မကုန်သည့် မောက်မာမှု၊ ပေးမှ လုပ်သည့် ပုဒ်မလေးများကိုလည်း ယနေ့တိုင် ကြားသိနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသို့သော အစိုးရ ဌာန အဖွဲ့အစည်းများ အနေနှင့် ပြည်သူကို မည်သို့သော အသိပညာပေးမှုများ ပြုလုပ်ကြပါမည်နည်း။
ပြည်သူများဘက်ကို ကြည့်ပြန်လျှင်လည်း နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောသကဲ့သို့ ‘ကိုယ့်နိုင်ငံ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာလည်းပဲ မနိမ့်ကျဘူး။ မြင့်မားတယ်’ ဆိုသော အနေအထားမျိုး ရှိကြပါပြီလားဟု မေးသည် ရှိသော် မည်ကဲ့သို့ ဖြေကြပါမည်နည်း။ အနီးစပ်ဆုံး နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရသော မြင်ကွင်းများကို ကြည့်လျှင်ပင် သိသာ ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပါသည်။ လူကူးမျဉ်းကြား လုပ်ပေးထား သော်လည်း လူကူးမျဉ်းကြားက မကူးကြသလို လူကူးမျဉ်းကြားတွင် လူတွေ ကူးနေသည်ကို မြင်နေရ သော်လည်း လုံးဝ ရပ်မပေးသည့် ကားများ၊ အများနည်းတူ စနစ်တကျ သတ်မှတ် ယာဉ်ကြောအတွင်း ဝင်ရောက် မောင်းနှင်ခြင်း မပြုဘဲ တစ်ဖက်ဆန့်ကျင် ယာဉ်ကြောသို့ ကျော်ခွ မောင်းနှင်ပြီး မီးပွိုင့်သို့ ရောက်သောအခါမှ လက်ညိုးတစ်ချောင်း ထောင်ကာ ပင်မယာဉ်ကြောအတွင်း အလုအယက် ပြန်လည် ဝင်ရောက်သည့် ယာဉ်မောင်းများ၊ လမ်းဘေးယာဉ် မရပ်ရ အမှတ်အသား ဖြူနီကြားတွင် အခန့်သား ရပ်နေကြသည့် အငှားယာဉ်များ၊ ဈေးမရောင်းရ ဆိုင်းဘုတ်ကို အမှီပြု၍ ဈေးရောင်းနေသော လမ်းဘေး ဈေးသည်များတို့ကို မည်သို့သော နိုင်ငံခြားသားက အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော လူမျိုးဟူ၍ သတ်မှတ်ကြပါမည်နည်း။
ပိုမို မြင့်မားလာသော မုဒိမ်းမှု၊ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု၊ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားသော တရားခံကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသည့် လူသတ်မှု၊ အုပ်စုဖွဲ့ လူသတ်မှုများ စသည်တို့အပြင် မကြာခဏ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင် အကြမ်းဖက်မှုများ စသည်တို့ အကင်း မသေသေးသည့် နိုင်ငံကို မည်သူက တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အပြည့်အဝရှိသော နိုင်ငံဟူ၍ ကင်ပွန်းတပ် ကြပါမည်နည်း။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က “ကျွန်တော်တို့ ကတော့ မိမိ တာဝန်ယူရမယ့် တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ အလှည့်ကျတဲ့ အခါမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်း အနေနှင့် အဆိုပါ စကားကို ပြောဆိုသည်မှာ မိမိ၏ ပြည်သူများ၊ မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝန်ကြီးဌာနများအပေါ် ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရှိသည့်အတွက် ပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယုံကြည်မှု ထားသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူများနှင့် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးတို့သည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ ဝင့်ထည်ရေး၊ ဒေသအတွင်းတွင် ‘သူတို့နဲ့ တန်းတူရည်တူ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အရည်အသွေးမျိုး’ ရှိကြောင်း ပြသဖို့ တာဝန်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများအရ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဓိက လိုအပ်နေသော အချက်တစ်ခုမှာ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာရေးပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတင်း ကြိုတင် ရရှိမှုသည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ ယခုအခါ သတင်း ကြိုတင် ရရှိမှု မရရှိသည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အရေးကိစ္စများကို ကြိုတင် ကာကွယ်မှု မပြုနိုင်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှသာ နောက်ကလိုက်၍ ဖြေရှင်းနေရသဖြင့် အပ်နှင့် ထွင်းရမည့် ကိစ္စကို ပုဆိန်ဖြင့် ထွင်းသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့အပြင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူရာတွင်လည်း မျက်နှာ ကြီးငယ်မလိုက် ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဖို့ လိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြစ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်ခြင်းကို ပြည်သူများ၏ အကူအညီ၊ နည်းပညာများ၏ အကူအညီနှင့် အမြန်ဆုံး စုံစမ်း ဖော်ထုတ်၍ တရားဥပဒေ၏ ရှေ့မှောက်သို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံ လိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်လာသည်ရှိသော် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်ကို အမှန်အတိုင်း သိရှိရန် လေ့လာစုံစမ်း၍ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူဟု ယူဆသူကို တရားဥပဒေ ရှေ့မှောက်သို့ အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အပါအဝင် တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ နိုင်ငံကြီးသား ပီသခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ဘဲ မိမိ၏ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ လူမျိုး၊ ဘာသာဟူသော စိတ်ကို အခြေခံ၍ တရားဥပဒေ ပြင်ပမှ နေ၍ အုပ်စုလိုက် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြုမည် ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးကို မည်သူကမျှ အဆင့်အတန်းရှိသော လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားသော လူမျိုးဟူ၍ သတ်မှတ်ကြမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဒီမိုကရေစီ စံချိန်၊ စံညွှန်းများနှင့် တန်ဖိုးများကို မသိနားမလည်သော လူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်သွားပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာငယ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကိုလည်း များစွာ ထိခိုက် ပျက်စီးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမြဲထာဝရ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်းမှာမူ ပိုမို စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ သတိထား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုပါသည်။
နိဂုံးချုပ် ရေးသားလိုသည်မှာ ယခုလဆန်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့တို့၏ မြစ်ကြီးနား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်မှာ အားရ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပြီး မကြာမီ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဆက်လက် ပြုလုပ်မည့် ဘားအံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့ အတွက်နှင့် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ အတွက် မူဘောင်များ ချမှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ပြည်လုံး၊ ပြည်ထောင်စု၏ တစ်နံတစ်လျား ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသား အားလုံးက မျှော်လင့် စောင့်စားလျက် ရှိကြပါသည်။ ထိုမှ တစ်ဆင့်တက်၍ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသော၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နှင့် ထိုက်တန်သော နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာကို ပြသနိုင်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသား အားလုံးက စိတ်တူ သဘောတူ ကြည်ဖြူစွာဖြင့်၊ နှစ်ဖက် အပေးအယူ အလျှော့အတင်းများဖြင့် နားလည်မှု ရယူကာ ဆွေးနွေးကြလျက် ထာဝရ ငြိမ်းချမ်ရေးကို ရယူကြခြင်း အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လက်ခံခဲ့သည့် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကို ကြိုဆိုကြပါစို့။
11/22/2013 08:43:00 AM learn-english
I have no compassion on you.
I'm not your joke.
ငါ မင်းရဲ့ ဟာသကောင် မဟုတ်ဘူး။
I'm too much behind.
ငါတော့ အများကြီး ခေတ်နောက်ကျနေတယ်။
ငါ့ကို မျက်စိရှုပ်အောင် မလုပ်နဲ့။
I've got it .
ငါ့ကို အကူအညီတစ်ခုလောက် ပေးနိုင်မလား?
Don't make me fool.
ငါ့ကို ရူးအောင် မလုပ်နဲ့။
I swear to say it.
I've already learnt.
It always reminds me.
ငါ့ကို အမြဲတမ်း သတိရစေတယ်ကွာ။
11/22/2013 08:39:00 AM Myanmar-news
11/21/2013 07:03:00 PM crime-news